Blacklist International က M3 မှာ Onic PH ကိုလှလှပပလေး အနိုင်ယူခဲ့ပါပြီ! | Codashop Blog MM
Blacklist International က M3 မှာ Onic PH ကိုလှလှပပလေး အနိုင်ယူခဲ့ပါပြီ!
လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Mobile Legends M3 World Championship ပြိုင်ပွဲမှာ Blacklist International က Onic PH ကို 4-0 နဲ့အနိုင်ရပြီး ချန်ပီယံဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအောင်မြင်မှုဟာဆိုရင်တော့ Lower Bracket ကနေ ကြိုးကြိုးစားစားတက်လာတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ချည်းဘဲပါဝင်တဲ့ ဒီအဖွဲ့အတွက်တော့ သိပ်ကိုဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်။
MLBB World Championship ဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တဲ့ Blacklist International Image credit: Moonton
Lower Bracket မှ အောင်မြင်မှုခရီးစဥ်
MPLI 2021 နဲ့ MSC 2021 မှာ ဒုတိယဆုနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ Blacklist Interntaional အတွက်တော့ ဒါဟာ Comeback တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲစဥ်အစပိုင်းမှာတော့ မြောက်အမေရိကမှ Blood Thirsty Kings (BTK) ကို 3-2 နဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီး Lower Bracket ကိုရောက်ရှိသွားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Lower Bracket မှာ အကြိတ်အနယ်ကြိုးစားပြီး Onic Esports (2-1)၊ Keyd Stars of Brazil (3-0)၊ RRQ (3-0) နဲ့ EVOS SG (3-0) တို့ကိုအသီးသီးကျော်ဖြတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူအရင်ဆုံး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ BTK နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ 3-1 နဲ့အောင်နိုင်ပြီး Final အဆင့်သို့တက်ရောက်သွားပါတော့တယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေချည်းပါဝင်တဲ့ Final ပွဲစဥ်
Onic PH က Upper Bracket မှာတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီး Final မှာစောင့်နေပါတော့တယ်။ Best-of-seven ဆော့ကြရမယ့် Grand Final မှာတော့ Blacklist International က ရှိသမျှအစွမ်းတွေအကုန်ထုတ်သုံးပါတော့တယ်။ Game-1 မှာ 3-1 နဲ့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး Game-2 မှာတော့ 4-0 နဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့သေချာသလောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Game-3 မှာ 3-0 နဲ့ထပ်မံအနိုင်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ‌ Blacklist International ဟာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ တစ်မှတ်အလိုနဲ့ဦးဆောင်နေခဲ့ပါပြီ။ နောက်ဆုံး Game-4 မှာလည်း ထပ်မံအနိုင်ရပြီး ပွဲစဥ်ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။
Blacklist International ကလွန်ခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလက M2 မှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ Bren Esports ပြီးရင်နောက်ထပ် ဖိလစ်ပိုင်အသင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသင်းက Prize Pool ဒေါ်လာ(၈)သိန်းထဲက ‌ဒေါ်လာ(၃)သိန်းကို သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး Kiel “Oheb” Soriano ကတော့ သူ့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့လက်စွမ်းကြောင့် MVP ရရှိသွားပါတယ်။
Previous articleCodashop နဲ့ MU Origin2တို့ရဲ့ ခရစ္စမတ် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်လာပါပြီ
Next articleCodashop ရဲ့ နှစ်ကုန် Promotion မှာ ဆုကြီးကြီးတွေ ကံစမ်းလိုက်ပါ!
Hin Nge Htwe January 9, 2022	At	11:53 pm
Thank you mobile legent bank bank